एक सिंगे गैंडाको हातमा कम्युनिष्टको जिम्मा - Sankalpa Khabar
एक सिंगे गैंडाको हातमा कम्युनिष्टको जिम्मा
२७ कार्तिक ०९:००
काठमाडौं । नेपालको कम्युनिष्ट राजनीति बुझेका, कुनै समय वाम राजनीति गरेका नेताहरू अचेल यहाँ कोही पनि कम्युनिष्ट छैन भन्न थालेका छन । झन दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार, कम्युनिष्ट पार्टी नै गर्लम्मै ढलेपछि त झन उनीहरूको भनाइ ठीकै हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालयमा साम्राज्यवादीले उत्पादन गरिदिएको महंगा गाडी पार्किङ गर्ने स्थानको अभाव भएर बबरमहलबाट च्यासल कार्यालय नै सरेपछि यो पार्टी कम्युनिष्ट होइन, समाजवादी त पनि होइन, पूजिवादी भएछ भन्नेको कुनै कमी छैन ।
नेकपाको असफल प्रयत्नबाट तीन टुक्रा भएको ठूलो घटक एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई पनि टपेर मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको छ । चितवनमा नै महाधिवेशन गर्न लागेकोले उसले महाधिवेशनको लोगोमा चितवनको एक सिंगे गैंडा प्रयोग गरेको छ । यो दुर्लभ गैंडा हो ।
प्रकृतिमा जुन प्राणी वातावरण अनुकुल परिवर्तित हुदैन, त्यो लोप हुन्छ । कुनै समय पृथ्वीमा डाइनोसरको राज थियो । अहिले त्यो लोप भएको छ । कुनै बेलामा मानिसको पुच्छर थियो, अहिले त्यो लोप भएको छ । जुन प्राणी समयानुकुल बदलिदैन, त्यो लोप हुन्छ । जुन प्राणीको अंग प्रयोगमा आउदैन, त्यो पनि लोप हुन्छ । जस्तो मानिसको पुच्छर ।
विश्वमा नै कम्युनिष्ट लोप हुदै गएको बेलामा नेपालमा भीमकाय भएको नेकपा अहिले छैन । अव त्यो स्वरूपमा होला ? नहोला अनेक प्रश्न छन । यस्तो बेलामा नेकपा एमालेले दुर्लभ एक सिंगे गैंडाको हातमा खिएर सकिन लागेको कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा थमाइदिएको छ । उसै दुर्लम जन्तुलाइ अब दुइवटा चिन्ता परेको छः
एक– आफनो अस्तित्व जोगाउने ।
दुइ–दुर्लभ कम्युनिष्टलाई जोगाइदिने ।
नारायणी किनारमा दश मंसिरमा एमालेले चितवन राताम्मे पार्नेछ । तर,सलल वगेको नारायणीलाइ फरक पर्ने छैन । अनि,त्यहाबाट राप्तीको तिरमा रहेको सौराह पुगेर उसले बन्द सत्र गर्नेछ । त्यहाँ नीति र विधिको कुरा हुने छैन किनभने गोदावरीले नै ६ हजार जनाको सामु ७० वर्ष ननाघेका केपी अ‍ोलीलाई नै अध्यक्ष बनाउने भनेर कसम खाइ सकेको छ । केपीलाइ सानातिना भाषणमा फुटकर नेताले धम्क्याउन चेतावनी र चुनौती त देलान तर अध्यक्षमा उठेर महाधिवेशनमा नै आच्छु आच्छु पार्ने हैसियत राख्दैनन । र,सौराहबाट केपी अ‍ोली फेरि अध्यक्ष चुनिए भनेर ताली बजाएर फर्केनेछन । यो दृश्य पनि सौराहको गैंडा र एमालेको लोगोको गैंडाले एक साथ हेर्नेछ ।
चितवनबाट फर्कने एमाले कस्तो हुन्छ ? चित्र अहिले नै देखिएको छ । कमजोर केपी ओली सर्वशक्तिमान केपी भएर गंगा स्नान गरेर फर्कनेछन ।
केपीलाई अहिलेसम्म एमालेमा चुनौती दिने नै माधव नेपाल थिए । उमेर र स्वास्थ्य दुवै कारणले झलनाथ रिटायर्ड भइसकेका थिए । सीपी मैनालीको भाषामा ‘झलनाथ त पहिरोमा बगेको घर हुन ।’ तर अब माधव नेपाल नभएपछि उनलाई भीम रावलको गगनले छुन सक्दैन । घनश्याम भुषालको सैद्धान्तिक कफी गफले कपमा तुफान आउला तर वालकोटमा सामान्य हावा पनि चल्दैन । झन लोगो नै गैंडाको भएपछि अब गाली गरेको मात्र होइन, सियोले घोचे पनि दुख्दैन,छुदैन । गैंडाको छाला छेडन कहाँ सजिलो छ र ?
केपी ओलीको पछिल्ला दिनमा एउटै सपना थियो(माधव नेपाल रहितको एमाले निर्माण । जब प्रचण्ड-केपी मिले माधवले दुई जना मिल्दैमा पार्टी मिल्दैन भने ।जब माधव प्रचण्ड मिले तब केपीले दुवैलाई टाउको दुखाइ ठाने । अनि,उनले प्रचण्डलाइ मात्र छुटाएनन, माधवलाइ आस्नै नसक्ने वातावरण यसरी वनाए कि उनी अर्कै दल गठनमा पुगे । किनभने अ‍ोली आफुलाइ चुनौती दिने कसैलाइ पनि पार्टीमा राख्न चाहदैनथिए । र,अब उनलाइ चुनौती दिने एमालेमा कोही पनि छैन ।
तर,यसो गर्दा के एमाले कम्युनिष्ट रहन्छ ? यो प्रश्न छ तर यो प्रश्नको पर्वाह केपीले कहिल्यै गरे होलान ? के उनी कम्युनिष्ट हुन ? यदि हुन्थे भने प्रचण्डको ३८ पेज लामो प्रस्तावमा कम्युनिष्ट पार्टीको आचरण त्यागेको,पार्टीको नीति लागु नगरेको, पार्टीमा पास गरेका कुरा सरकारले लागु गर्नुपर्छ भनेको कुरालाइ किन मानेनन ? यदि कम्युनिष्ट पार्टी र लेनिनवादी विचार धारा हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले त्यही गर्छ,जुन उसको पार्टीले निर्णय गर्छ । अर्थात, केपीले त्यो लाइन उहिल्यै त्यागिसके । खासमा भन्ने होभने कांग्रेस र उनीमा कुनै भिन्नता छैन ।
नेपालको ७० वर्षे प्रजातान्त्रिक आन्दोलन उग्र कम्युनिष्टलाइ प्रजातान्त्रिक गर्दैमा वितेको छ । एउटा उठाएको हतियार विसाउन नपाउदै अर्कोले उठाएको छ । अब यो गल्ती कसैले गर्नहुन्न । यसैले अब एमाले वामहरूको गुरू वन्नुपर्छ र हिजो गल्तीले हतियार उठाएकाहरू पनि अव मुलधारमा नै वस्नुपर्छ । मनमा क्रान्ति र मुखमा शान्तिको अब कुनै ठाउँ छैन । एउटा गोडा शहरमा र अर्को गोडा जंगलमा त हुनैसक्दैन । यो सन्देश पनि एमालेले दिनुपर्छ । र,अप्ठयारो नमानी एमाले अब कम्युनिष्ट होइन,समाजवादी पथमा हिंडनुपर्छ । किनभने हतियारको बलबाट हुने यति हो,अव समृद्धिको पथमा हिंडनुपर्छ । हामी धेरै पछि परिसक्यौं ।
आफ्नो पक्षलाई भोट नहाल्न भन्दै ओली पक्षले पर्चा बाँडेपछि…
१४ मंसिर ०९:०७
कांग्रेस महाधिवेशनः लुम्बिनी, गण्डकी र सदूरपश्चिममा मतदान सकियो, आजै…
१८ मंसिर १८:५३
१५ मंसिर १५:४६
भृकुटीमण्डपमा हेर्नुस् राप्रपा महाधिवेसनको रौनक
१८ मंसिर १४:०४
कांग्रेस प्रदेश अधिवेशन – आज मनोनयन, भोलि मतदान
१७ मंसिर ०८:०३
एमाले १०औँ महाधिवेशनमा मतदानकाे ताजा अवस्था (हेर्नुहाेस् तस्विरमा)
१४ मंसिर ०९:४३
एमाले सचिवमा ओलीले प्रस्ताव गरेका पाँचै नेता विजयी, कार्की…
१४ मंसिर १६:१४
१९ मंसिर १७:०१